IPL : बलियो मुम्बई बिरुद्ध राजस्थानको लयमा फर्कने आशा – WicketNepal
IPL : बलियो मुम्बई बिरुद्ध राजस्थानको लयमा फर्कने आशा
Sakar Sedhain, २०७७ आश्विन २०, मंगलवार १५:३०
युएईमा जारी १३ औं संस्करणको आईपिएल अन्तर्गत मंगलबार २० औं खेलमा रोहित शर्माको कप्तानिमा रहेको मुम्बई इन्डियन्स र स्टिभ स्मिथको कप्तानिमा रहेको राजस्थान रोयल्सबिच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। खेल नेपाली समय अनुसार राति ७:४५ बजे आबु धाबी स्थित शेख जायद स्टेडियममा सुरु हुनेछ। ५ खेल खेलेको मुम्बई ५ खेलमा ३ जित र २ हारसहित तालिकाको दोस्रो स्थानमा छ भने ४ खेलमा २ जित र २ हारपछि पाचौं स्थानमा छ।
कस्तो छ मुम्बई : लिगमा सन्तुलित देखिएको टिम मध्ये रहेको मुम्बईले पहिलो खेलमा चेन्नाईसंगको हार पछि प्रदर्शन निरन्तर सुधार गरिरहेको छ। टिमको ब्याटिंग र बलिंग दुवै पक्ष बलियो छ। लयमा नदेखिएका ओपनर क्विन्टन डीकक पनि हैदरावाद बिरुद्ध ६७ रन बनाउदै चम्किएका थिए। रोहित शर्मा, इशान किशन, सुर्यकुमार यादब जस्ता ब्याट्सम्यानहरुले माथिल्लो क्रममा तथा त्यसपछि काइरन पोलार्ड, हार्दिक पान्ड्या, क्रुनाल पान्ड्याले मध्यक्रममा विस्फोटक ब्याटिंग गरिरहेका छन्। बलिंगमा ट्रेन्ट बोल्ट, जस्प्रित बुम्राह, राहुल चाहर, जेम्स प्याटीनसन र क्रुनाल पनि उत्कृस्ट लयमा छन्। खेलाडीको लय र टिम सन्तुलनले मुम्बई ढुक्क देखिएको छ जसलाई पराजित गर्न राजस्थानले विशेष क्रिकेट खेल्नु पर्नेछ।
कस्तो छ राजस्थान : पछिल्लो २ खेलमा हार पछि राजस्थानको कमजोर पक्षहरु उजागर गरेको छ। टिमको माथिल्लो क्रमका ब्याट्सम्यानहरु कप्तान स्टिभ स्मिथ सहित जोस बटलर, सन्जु स्यामसन, रोबिन उथप्पा, रीयाँ पराग नचल्नु हारको प्रमुख कारण बनिरहेको छ। अनुभवी उथप्पा लगातार फ्लप भैरहेका छन् भने शारजाहको सानो मैदानमा चम्किएका स्यामसन र स्मिथ पनि २ खेलमा फ्लप भएका छन्। हारेको पछिल्लो दुवै खेलमा ब्याटिंगमा पर्याप्त रन नबन्नु कारण बनेको थियो। राहुल तेवतिया, महिपाल लोमरोर जस्ता भारतीय खेलाडीहरु टिमको आशा बनिरहेका छन्। बलिंगमा जोफ्रा आर्चरले उत्कृस्ट प्रदर्शन गरेता पनि उनले अन्य बलरबाट साथ कम पाएका छन्। इंगलिस पेसर टम करनले ब्याटिंगमा योगदान दिए पनि बलिंगमा योगदान कमजोर छ। जयदेव उनदकत, श्रेयस गोपालको प्रदर्शन कमजोर हुँदा टिम चिन्तित छ। लगातार २ हार पछि राजस्थानमा समस्याको चांग देखिएको छ। यो अवस्थामा मुम्बई जस्तो टिम बिरुद्ध जित मुस्किल देखिएता पनि यदी आज जितेको खण्डमा टिमको आत्मविश्वास भने पक्कै बढ्नेछ।
मुम्बईको प्रतियोगितामा नतिजा :- लिगको उद्घाटन खेलमा चेन्नाईसँग ५ विकेटको हार बेहोरेको मुम्बईले दोस्रो खेलमा कोलकाता विरुद्ध ४९ रनको फराकिलो जित दर्ता गरेको थियो। बैंगलोर विरुद्ध सुपर ओभरमा पराजित भएको मुम्बई पछिल्लो २ खेलमा अपराजित रहेको छ। मुम्बईले पन्जाबमाथी ४८ तथा हैदराबादमाथी ३४ रनको जित हात पारेको थियो।
राजस्थान रोयल्सको प्रतियोगितामा नतिजा :- राजस्थानले पहिलो खेलमा चेन्नाई विरुद्ध १६ रनको तथा दोस्रो खेलमा पन्जाब विरुद्ध ४ विकेटको जित दर्ता गरेको थियो। सुरुवाती २ खेलमा २ जित हात पारेको राजस्थान पछिल्लो २ खेलमा पराजित भएको छ। तेस्रो खेलमा कोलकातासँग ३७ रनले तथा चौथो खेलमा बैंगलोरसँग ८ विकेटले पराजित भएको थियो।
हेड टु हेड :- हालसम्म यी दुई टोलिबिच कुल २३ पटक प्रतिस्पर्धा भएको छ जसमध्ये दुबै टोलिले समान ११-११ खेलमा जित हात पार्दा १ खेल नतिजाविहिन भएको छ। २०१५ यता मुम्बईले राजस्थानलाई पराजित गर्न असफल रहेको छ। मुम्बईले पछिल्लो पटक राजस्थानलाई २०१४ मे २५ मा ५ विकेटले पराजित गरेको थियो।
मैदान :- हालसम्म शेख जायद स्टेडियममा ६ खेल खेलिएको छ जसमध्ये समान ३-३ पटक पहिले ब्याटिंग गर्ने तथा दोस्रो ब्याटिंग गर्ने टिमले जितेका छन्।
पहिलो इनिंग औसत स्कोर : १६८ (जारी प्रतियोगितामा), चेज गर्दाको रेकर्ड : विजयी – ३, हार -३, बराबरी – ०
टिममा हुन सक्ने परिवर्तन :
मुम्बई :- ५ खेलमा ३ जित हात पारिसकेको मुम्बई निकै सन्तुलित देखिन्छ। ब्याटिंगमा प्रशस्त म्याच विनर हुनु साथै बलिंगमा घातक बलरहरु छन्। पछिल्लो खेलमा जेम्स प्याटिन्सनको शानदार बलिंगका कारण नाथन कुल्टर नाइलले मौका पाउन थप प्रतीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ। मुम्बईले कुनै परिवर्तन नगरी विजयी टिमलाई मैदान उतार्न सक्छ।
राजस्थान रोयल्स :- पहिलो २ खेलमा जित हात पारेको राजस्थान लगातार २ खेलमा पराजित भएको छ। राजस्थानको ब्याटिंग टप अर्डरमा निकै निर्भर छ। राजस्थानले आज फ्लप रोबिन उथप्पाको ठाउँमा यशस्वी जैसवाललाई मौका दिन सक्छ जसकारण जैसवाल र बटलरले ओपनिंग गर्दा स्मिथ र स्यामसनले १ र २ नम्बमा खेल्नु पर्ने हुन्छ। टिमले टम करनको ठाँउमा एन्ड्रु टायलाई मैदान उतार्न सक्छ।
मुम्बईको सम्भावित ११ : रोहित शर्मा ( कप्तान ) , क्विन्टन डीकक ( विकेटकिपर ) , सुर्यकुमार यादव, इशान किशन, काइरन पोलार्ड, हार्दिक पान्ड्या, क्रुनाल पान्ड्या, जेम्स प्याटिन्सन , राहुल चाहर, ट्रेन्ट बोल्ट, जस्प्रित बुम्राह
राजस्थानको सम्भावित ११ : यसस्वी जैसवाल/रोबि उथप्पा, जोस बटलर ( विकेटकिपर ) , सन्जु स्यामसन, स्टिभ स्मिथ ( कप्तान ) , राहुल तेवतिया, रियान पराग, टम करन/एन्ड्रु टाय, जोफ्रा आर्चर, श्रेयस गोपाल, अंकित राजपुत, जयदेव उनदकत
क्विन्टन डिकक :- मुम्बईका विकेटकिपर ओपनिंग ब्याट्सम्यान डिकक सुरुवाती खेलहरुमा राम्रो प्रदर्शन गर्न नसकेता पनि हैदराबाद विरुद्ध ३९ बलमा ६७ रनको आक्रामक पारी खेलेका थिए।
ट्रेन्ट बोल्ट :- न्युजिल्यान्डका तिव्र गतिका बलर ट्रेन्ट बोल्टले पछिल्लो खेलमा हैदराबाद विरुद्ध शारजाहको सानो मैदानमा मात्र २८ रन खर्चेर २ विकेट लिएका थिए।
महिपाल लामरोर :- बैंगलोर विरुद्ध जारी सिजन आफ्नो पहिलो खेल खेलेका लामरोरले ३९ बलमा ४७ रनको पारी खेलेका थिए। उनले ३ छक्का हिर्काएका थिए।
सन्जु स्यामसन :- पहिलो दुई खेलमा ७४ र ८५ रनको विस्फोटक पारी खेलेका स्यामसनको ब्याट पछिल्लो दुई खेलमा शान्त रहेको छ। उनी आजको खेलमा ठूलो पारी खेल्दै आफ्नो प्रदर्शनमा स्थिरता ल्याउन चाहन्छन्।
१. मुम्बईका कप्तान रोहित शर्मा आईपिएलमा मुम्बईका लागि ४००० रन पूरा गर्नबाट ८६ रन टाढा छन्। उनले लिगमा ५००० रन पूरा गरिसकेका छन् जुन उनी बाहेक विराट किहली र सुरेश रैनाले गर्न सकेका छन्।
२. आईपिएलमा ५० छक्का पूरा गर्नबाट सुर्यकुमार यादव मात्र २ छक्का टाढा छन्।
३. जोस बटलर आईपिएलमा १५०० रन बनाउन ६७ रन टाढा छन् भने राजस्थानका लागि १००० रन पूरा गर्नबाट ९४ रन टाढा छन्।
४. राजस्थानलाई २०१८ देखि खेलेको सबै ४ खेलमा मुम्बईले पराजित गरेको छ